Kutsvaga Kufambisa muWiricheya Nzvimbo Isingawanikwe
Kunyangwe nekurongeka kwezvematongerwo enyika uye kuziva mazuva ano, kuchine nzvimbo dzinoverengeka dzisiri wiricheya kufambidzana. Mamwe mamuseum, emitambo yemamuvhi, mahofisi nezvimwe zvivakwa zvakatadza kupa mukana kuzere kwe remara vanhu.
Neiri dambudziko riripo, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kana uchibuda uye iwe unofanirwa kugadzira yako wega imba zvakanyanya wiricheya-shamwari. A ramp inzira yakanaka kwazvo yekuita kuti imba yako iwedzere wiricheya kufambidzana.
Kana iwe uchangobva kutenga imba, pane nzira dzinoverengeka dzekuita kuti iwedzere kufambidzana uye imwe yedzakanakisa nzira dzekuita izvi kuisa mune modular ramp. Izvo zvinogadzirwa kubva kualuminium inoitirwa kusungirirwa zvachose kuimba.
Vamwe vane mabharaki kune avo vanogona kunetseka kufamba uye yakasimba ramp kugadzirisa iyo wiricheya.
Kwete seyakasarudzika senge modular mhando, idzi dzakasimba ramp kazhinji inogadzirwa nematanda. Iwo ekugadziriswa kwechinguva kwemabhodhi akasimba akaradzikwa pamatanho ekunze. Iyo ramp iri nyore kuisa uye kubvisa uye yakanakira nguva yezhizha.
Izvi zvidiki ramp iyo inogona kuiswa pamusoro penzvimbo dzisina kuenzana sematanho madiki uye nekutsvedza masuo. Vakatendera mavhiripu uye ma scooter anoyambuka humps pasina kunamira. Iko kumisikidza kunofanirwa kuve kwechigarire sezvo ivo vachibatsira vese remara uye vanhu vakagwinya.
Suo Rekumashure ramp
Kazhinji yakaiswa mumavans uye anoshandiswa neremote control. Izvi zvakakodzerwa nevanhu vanoshandisa scooter kana mavhiripu uye uchiri kukwanisa kufamba nzendo pfupi. Vanhu vamwe chete vanogona kutora yavo kufamba michina navo munzira.
Seizvo zita rinoratidza, izvi ramp mapanga kupinda kukura saizi. Iyo inotakurika uye inogona kushandiswa nemushandisi kana vakasangana nemasitepisi mukubuda kwavo. Asi ivo havana kusimba zvakakwana kuti vatsigire sikuta kana wiricheya.
Sosaiti haiwanzogamuchira iyo remara; nokudaro zvakanaka kugadzirira. Izvi ramp yakanaka kumba uye inouya inobatsira kana uchifamba. Kugadzirira kunogona kukubatsira iwe kukunda zvimwe zvekutarisa izvo zvichiri munharaunda nhasi.